Barnaamijyada ugu fiican ee cimilada. Saadaasha hawada iyo saadaasha | Saadaasha Shabakadda
Kahor inta aynaan helin waqtiga oo kaliya wararka si aan u ogaano cimilada aaggeenna. Maanta, mahadsanid horumarka tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta, way kala duwan yihiin codsiyada cimilada taasi waxay noo oggolaan kartaa inaan ka ogaanno saadaasha hawada teleefoonkeena gacanta. Maaddaama ay jiraan codsiyo kala duwan oo cimilada ah, waa inaad ogaataa midka aad dooraneyso iyadoo ku xiran isticmaalka aan siin doonno iyo muhiimadda saxda ah ee aan rabno inaan ku ogaano xaaladda saadaasha hawada.
Maqaalkan waxaan kuu sheegaynaa kan ugu fiican barnaamijyada cimilada iyo waxa barnaamijku u baahan yahay inuu fiicnaado.
1 Muxuu u baahan yahay barnaamijka cimilada
2 Barnaamijyada cimilada ugu fiican
2.2 Saadaasha hawada
2.3 Goobta cimilada
2.4 Cimilada duurka
2.5 Barnaamijyada hawada ee duugga ah: cayayaanka cimilada
Muxuu u baahan yahay barnaamijka cimilada
Kahor intaanan oran hal codsi cimilo ayaa ka fiican mid kale, waa inaan aragnaa astaamaha aan ubaahanahay daqiiqadaas. Waxaa jira fursado aan la koobi karayn laakiin waxa ugu weyn ee laga raadsado barnaamijku waa inay fududahay in la isticmaalo oo aanu lahayn xayeysiis aad u fara badan oo duulaan ah. Markii aan ku rakibno barnaamijkan noocan ah taleefanka gacanta, waxaan raadineynaa fudayd ku saabsan ogaanshaha saadaasha hawada. Aan aragno maxay yihiin sifooyinka noocan ah ee loo baahan yahay in loo adeegsado dalabkan:
Heerkulka iyo qabowga dabaysha: laga yaabee inay tahay isbedelka saadaasha hawada ee ugu raadinta badan. Heerkulka iyo dareenka kuleylka ee aagga aan aadeyno ayaa muhiim u ah in la ogaado nooca dharka aan u baahan doonno. Tusaale ahaan, haddii aan u safrayno meel ka baxsan magaaladeena ama magaaladeena waxaan u baahan doonnaa inaan ogaanno heerkulka iyo dareenka kuleylka ee goobta la tagayo.
Saadaasha saacadda: mararka qaarkood saadaasha hawadu way ka dhib badan tahay waana qalad. Sidaa darteed, ogaanshaha saadaasha saacadaha ayaa ka saxsan. Muhiim ma aha oo kaliya in la ogaado maalinta roobku da'ayo laakiin waqtiga la qaban doono.
Ogeysiis: Haddii cimiladu si weyn isu bedesho, saadaasha waa la beddeli karaa waxaanan helnaa digniin-waqtiga-dhabta ah oo ku saabsan isbeddelada suurtagalka ah ee la diyaarinayo.
Goobta: Codsigu sidoo kale wuxuu ubaahanyahay inuu awoodo inuu nahelikaro oo uu bixiyo jawiga jawiga juquraafi ahaan halka aan jogno. Waa muhiim in arjiga uu dayax gacmeedku ku xirnaado mana ahan inaan gacanta ku dhigno meesha aan joogno.
Qorrax ka soo baxa iyo qorrax dhaca: Qorrax ka soo bax iyo qorrax dhaca waa laba ifafaale qurxoon oo maalinle ah oo waajib ah. Waxay kuxirantahay labadan qaybood ee maalintii, waxaan garan karnaa sida maalmuhu u korayaan ama u yaraanayaan iyadoo kuxiran xiliga sanadka. Waxa kale oo aad qorshaysan kartaa bixitaan maalin ama habeen ah iyada oo aan lagaa yaabin.
Badda: Gaar ahaan xilliga xagaaga waxaa xiiso leh in la ogaado heerkulka biyaha, hirarka, saacadaha hirarka sare iyo kuwa hoose si loo qabto hawlo biyo ah ama aad xeebta ugu tagto si deggan.
Xaaladda dabaysha: xawaaraha jihada dabaysha ayaa muhiim u ah nooc kasta oo hawlo dibadeed ah oo aan qaban doonno.
Barnaamijyada cimilada ugu fiican
Waa mid ka mid ah codsiyada ugu wanaagsan ee cimilada ee aad ka heli karto dhammaan macluumaadka hal garaaf. Isla marka aad gasho arjiga waxaad la tashan kartaa dhammaan macluumaadka heerkulka ugu sarreeya iyo kan ugu yar, heer-kulka hadda jira, xawaaraha dabaysha iyo jihada, xaaladda cirka, suuragalnimada roob, qorax-soo-baxa iyo qorax dhaca, iwm Mid ka mid ah faa'iido darrooyinka codsigan ayaa ah in dhammaan macluumaadka ku jira hal sawir ay xoogaa culus noqon karaan in la eego.
Si kastaba ha noqotee, waa codsi bixiya saadaasha hawada heer sare oo faahfaahin ah marka loo eego codsiyada kale ee cimilada. Si kastaba ha noqotee, waa saadaalin xoogaa ka wareersan maadaama ay leedahay xoogaa fikrado farsamo oo badan oo looga imaan karo aqoonta saadaasha guud.
Codsigan wuxuu bixiyaa saadaalin sax ah oo maxalli ah iyadoo lagu mahadinayo macluumaadka ay adeegsadayaasha laftoodu ku bixin karaan waqtiga dhabta ah. Waana dad badan oo leh saldhigyo cimilada guryahooda lagu rakibo. Codsigan wuxuu ka shaqeeyaa aduunka oo dhan. Waxay noqon kartaa in codsigani uusan adiga ku qoondeynaynin waana inaad ku qortaa magaca magaalada gacanta. Ahaanshaha codsi aan diiradda saarin suuqa Isbaanishka, waa Waxaa laga yaabaa inaad dhibaatooyin kala kulanto unugyada cabirka. Iyaga waa in laga beddelaa gacanta.
Faa'iidada ayaa ah in goluhu gebi ahaanba la habeyn karo oo waad ku dari kartaa oo ka saari kartaa macluumaadka si waafaqsan dantaada.
Barnaamijyada hawada ee duugga ah: cayayaanka cimilada
Waa mid ka mid ah codsiyada ugu da'da weyn waqtiga waana mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee loo yaqaan 'bilicsanaanta' taxaddar badan. Dhammaan macluumaadka waxaa lagu sameyn karaa tabs waana awoodaa Hubi xaaladda cimilada ee hadda jirta iyo saadaasha labadaba saacado iyo maalmo. Midabka buluuga ah waa halyeeyada inkasta oo ay ku kala duwanaan karto iyadoo ku xiran cimilada. Tusaale ahaan, haddii roob da'o, waxay u muuqan doontaa midab madow oo ay ku jiraan dhibcaha dhibcaha.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto codsiyada ugu wanaagsan ee cimilada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Qalabka Saadaasha hawada » Codsiyada cimilada
Caano bunni ah